किशोर नेपाल, पुस २८, २०७५
मेयर साहेबले संसार घुमि सक्नुभयो र पनि आफ्नै सहर घुम्नुभएको छैन । आफैं जन्मिएको र खोपी खेलेर हुर्किएको सहर घुम्नु नै किन पर्‍यो र ? फोहोरको डुंगुर नेपाली राजनीतिको स्थायी र स्थिर तत्व बनिसकेको अवस्थामा राजधानी सहरमा त्यसले पार्ने प्रभावको आँकलन गर्नु सजिलो नभएको थाहा छ मेयर साहेबलाई । पुरा पढ्नुहोस्
फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत पठाइएको सन्देश अस्वाभाविक लाग्दा डिलिट गर्न मिल्ने सुविधा थिएन, तर फेसबुकले अब यस्तो सुविधासमेत उपलब्ध गराउन थालेको छ । यसका लागि फेसबुकले ‘अनसेन्ड’ नामक फिचर ल्याएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
बलिउड अभिनेत्री तथा मोडल निकिता रावले हालै मुम्बईमा तमिल चलचित्रका लागि ग्ल्यामर्स फोटोसुट गराएकी छिन् । त्यस क्रममा निकिताले फरक–फरक पहिरनमा आकर्षक तस्बिर खिचाएकी थिइन् । पुरा पढ्नुहोस्
पहिले–पहिले नेपालमा कालिज पाल्न पाइने तर बेच्न नमिल्ने नियम थियो । ०७३ देखि भने उक्त नियम फेरियो । रहर हुनेहरूले कालिज पाल्न सक्छन् र यसबाट बनेका बिभिन्न परिकारको स्वाद लिन सक्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
जनक तिमिल्सिना, पुस २८, २०७५
जब मलाई विश्वविजेता घोषित गरियो । अगाडि हेरें, त्यहाँ कोही पनि नेपाली देखिनँ । लगत्तै हाम्रो राष्ट्रिय गीत बज्न थाल्यो । श्याम श्रेष्ठले नेपाली झन्डा ओढाइदिए । रिप्ले भएझैं एकाएक पुराना कुरा आँखामा सलबलाउन थाले । आमा, सहयोगी एवं प्रशंसकहरूलाई सम्झिएँ । आँखा टिलपिलाएर आँसु छचल्कियो । पुरा पढ्नुहोस्
केही लिग सर्वथा बिर्सनलायक रहे । यसैमा एउटा लिगको संस्करण रहनेछ, यसपटकको सहिद स्मारक लिग ए डिभिजन–२०७५ । यसपटकको लिग वास्तवमै फिक्का–फिक्का रह्यो । यसका उपलब्धि नगण्य रहे । त्यसैले जति–जति बेला यो लिगलाई सम्झिइनेछ, यो लिगको कमी–कमजोरीकै लागि सम्झिइनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
स्वस्तिक श्रेष्ठ, पुस २८, २०७५
शारीरिक आकर्षण बढाउने उद्देश्यका साथ युवाहरूमा शरीरका विभिन्न भागमा भगवानका आकृतिदेखि लिएर आफन्तको चित्रसम्म कोर्ने प्रचलन फस्टाउँदो छ । टाटुका विषयमा जानकारी दिने र यसका सकारात्मक पाटालाई बुझाउने उद्देश्यका साथ रुपन्देहीमा पहिलो पटक दुईदिने टाटु फेस्टोको आयोजना गरिएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र जय श्री दामको कुरा गरौं, यो चलचित्रको कथा गहन छ जसमा आश्रम र विभिन्न कुटीमा बस्ने बाबाहरूको प्रतिनिधि चर्तीकला तथा बेराजगार र खाली गोजीमा भौंतारिने युवाहरू पैसा कमाउन कतिसम्म गर्न सक्छन् ? भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ । यद्यपि यो चलचित्र अपेक्षा गरेजस्तो चलेन । पुरा पढ्नुहोस्
मिलन चाम्सले – ‘अनमोल केसीसँग जोडेर केही सञ्चारकर्मीले गलत समाचार लेख्नु भएको रहेछ, म गलत समाचार लेख्नेहरूलाई पनि श्राप दिन्छु ।’ चाम्सले श्राप दिने विषयलाई प्राथमिकता दिँदा समारोहमा भेला भएका दर्जनौं सञ्चारकर्मी भने गललल्ल हाँसिरहेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्